हर्के र पहिरो – Samip Dhungel's Poetry Blog
हर्के र पहिरो
हर्केको खुब सपना देख्ने बानि थियो । बिहानै देख्थ्यो । राति देख्थ्यो। जब सारा सहर बिउझीएको हुन्थ्यो , त्यो बखत पनि हर्के सपना देखि रहेको हुन्थ्यो । उ निदाएको हुँदैन थियो, सपना भने देखि रहन्थ्यो । पच्चीस बसन्तमा हर्केले खुब सपना देख्यो ।
हर्के आफ्नो सपनाहरुलाइ खुब माया गर्छ । कहिले काही भक्त राजको ‘ हजार सपनाहरुको’ बोल भएको गीत सुनेर उसको मनमा चिसो पस्ने गर्छ । तर पनि हर्के सपना देख्न छोडदैन । उ आफ्नो सपनाहरु बडो जतनको साथ संचय गर्ने गर्छ । हर्केले आफ्नो सपना हरुको मुख आकाश तिर फर्काएर थाक लगाउने गरेको छ ।
समय बित्दै गयो ।
त्यो थाक निकै चाडै थुप्रो भयो । त्यो थुप्रो ढिस्को बन्यो । ढिस्कोलाइ पहाड बन्न धेरै समय लागेन ।
एक दिन, त्यो पहाडमा किस्मत पर्यो , झर्झर झर्यो भाग्य, जसरि झर्छ असारमा पानि । अनि त्यो पहाडमा पहिरो गयो ।
त्यो पहिरोमा चेपिएर हर्के निकै घाइते भयो । झन्डै सखाप भएको ।
हर्केले त्यो सपना स्खलन भएको ठाउमा एउटा रिटेनिङ्ग वाल बनाउने निधो गर्यो । समयले उसलाई हानेको पत्थरहरुलाइ जोडेर बनायो पनि । तितिर बितिर भएका सपनाहरुलाई उंधो फर्काएर सुतायो, एउटा कृतिम समतल ठाउं बनायो । बिवस्ताका थाममा कृतिम घर बनायो ।
हर्के थाक्यो अनि सुत्यो ।
जब हर्के उठ्यो, उसको घर देखेर प्रसंशा गर्न उसका छिमेकीहरु आइपुगेका थिए । हर्के सबैको प्रसंशाको उत्तरमा एउटा हाँसो खिस्स फुस्काई दिन्छ ।
त्यहि घरमा बसेर हर्के हिजो आज सुख दुख को विवेचन गर्ने गर्छ । अरु सपना देख्ने हिम्मत छैन उसको, कतै फेरी पहाड उर्लेर आउने हो कि ?
Posted on July 15, 2016 by dhungelsamip.	This entry was posted in tech tech net. Bookmark the permalink.
कोशी सधै →